Ozi Ọma Matiu Dere 1:1-25
Usoro ọmụmụ Jizọs Kraịst (1-17)
Mgbe a mụrụ Jizọs (18-25)
1 Akwụkwọ kọrọ akụkọ* banyere Jizọs Kraịst,* nwa Devid,+ nwa Ebreham:+ 2 Ebreham mụrụ Aịzik,+Aịzik amụọ Jekọb,+Jekọb amụọ Juda+ na ụmụnne ya ndị nwoke. 3 Juda mụrụ Pirez na Zira.+ Tema bụ nne ha. Pirez mụrụ Hezrọn,+Hezrọn amụọ Ram.+ 4 Ram mụrụ Aminadab,Aminadab amụọ Nashọn,+Nashọn amụọ Salmọn. 5 Salmọn mụrụ Boaz, onye Rehab mụụrụ ya.+ Boaz mụrụ Obed, onye Rut mụụrụ ya.+ Obed mụrụ Jesi.+ 6 Jesi mụrụ Eze Devid.+ Devid mụrụ Solomọn,+ onye nwunye Yuraya mụụrụ ya. 7 Solomọn mụrụ Rehoboam,+Rehoboam amụọ Abaịja,Abaịja amụọ Esa.+ 8 Esa mụrụ Jehoshafat,+Jehoshafat amụọ Jehoram,+Jehoram amụọ Ọzaya. 9 Ọzaya mụrụ Jotam,+Jotam amụọ Ehaz,+Ehaz amụọ Hezekaya.+ 10 Hezekaya mụrụ Manase,+Manase amụọ Emọn,+Emọn amụọ Josaya.+ 11 Josaya+ mụrụ Jekonaya+ na ụmụnne ya ndị nwoke mgbe a dọọrọ ndị Juu n’agha laa Babịlọn.+ 12 Mgbe ha nọ na Babịlọn, Jekonaya mụrụ Shieltiel,Shieltiel amụọ Zerubabel.+ 13 Zerubabel mụrụ Abayọd,Abayọd amụọ Elayakim,Elayakim amụọ Ezọ. 14 Ezọ mụrụ Zedọk,Zedọk amụọ Ekim,Ekim amụọ Ịlayọd. 15 Ịlayọd mụrụ Elieza,Elieza amụọ Matan,Matan amụọ Jekọb. 16 Jekọb mụrụ Josef di Meri, onye mụrụ Jizọs,+ onye a na-akpọ Kraịst.+ 17 Ọgbọ ahụ niile, malite n’Ebreham ruo na Devid, dị ọgbọ iri na anọ. Malitekwa na Devid ruo mgbe a dọọrọ ha n’agha laa Babịlọn, dị ọgbọ iri na anọ. Malitekwa mgbe a dọọrọ ha n’agha laa Babịlọn ruo na Kraịst, dị ọgbọ iri na anọ. 18 Ma, otú a ka e si mụọ Jizọs Kraịst. N’oge Josef kwere Meri nne Jizọs nkwa na ọ ga-alụ ya, tupu ha alụọ, a hụrụ na Meri dị ime n’ike mmụọ nsọ.+ 19 Ma, Josef di ya bu n’obi ịgba ya alụkwaghịm na nzuzo n’ihi na ọ bụ onye ezi omume, ọ chọghịkwa ibupụta ya n’ihu ọha.+ 20 Ma mgbe o chebachaara ihe ndị a echiche, mmụọ ozi Jehova* bịakwutere ya ná nrọ, sị ya: “Josef, nwa Devid, atụla egwu ịkpọrọ Meri nwunye gị laa, n’ihi na ime ahụ ọ dị si n’ike mmụọ nsọ.+ 21 Ọ ga-amụ nwa nwoke, ị ga-agụkwa ya Jizọs,*+ n’ihi na ọ ga-azọpụta ndị ya ná mmehie ha.”+ 22 Ihe a niile mere ka ihe Jehova* si n’ọnụ onye amụma ya kwuo mezuo. Ọ sịrị: 23 “Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-adị ime, mụọ nwa nwoke. A ga-agụ ya Ịmanuel,”+ nke pụtara “Chineke Nọnyeere Anyị.”+ 24 Josef wee teta n’ụra, mee ihe mmụọ ozi Jehova* gwara ya ma kpọrọ nwunye ya laa. 25 Ma ya na ya enweghị mmekọahụ ruo mgbe ọ mụrụ nwa nwoke,+ o wee gụọ ya Jizọs.+
^ Ma ọ bụ “Akwụkwọ usoro ọmụmụ.”
^ Na Baịbụl a, aha Chineke bụ́ Jehova gbara ugboro 237 n’Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst. Nke a bụ nke mbụ ya. Gụọ A5.
^ Jizọs na aha Hibru bụ́ Jeshụa, ma ọ bụ Joshụa, pụtara otu ihe. Ọ pụtara “Jehova Bụ Nzọpụta.”